ငှက်ပျောပီးလ်အလွန်အသုံးဝင် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • အကြံပြုချက်များ • လှပမှု • ကောင်းသောအလေ့အထများ • လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ • သဘာဝကကုစား "Banana ပီးလ်အလွန်အသုံးဝင်
သငျသညျဤသည်ကိုကြည့်ပါပြီးနောက်သင်ကတဖန်တစ် Banana ပီးလ်ပစ်ဘယ်တော့မှမတော်မူမည်
ငှက်ပျောသီးမှာပရိုတိန်း, ဖိုင်ဘာ, ဗီတာမင် A, B6, နှင့် C, ပိုတက်စီယမ်, မန်းဂနိစ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဖောလိတ်, riboflavin, niacin, သံနှင့်အတူတင်ဆောင်ခံရသငျသညျအစာကိုစားနိုင် healthiest အသီးတဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဿုံသောအဘို့ကိုသွားဖမ်းပြီး-and ရန်လွယ်ကူégalement sont ။ ငှက်ပျောသီးတောင်မှသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်, ရည်ရွယ်ချက်ကြင်တိုးမြှင့်သီးနှံ, အသီးသုပ်, ရေခဲမုန့်နှင့်အပေါ်အရသာရှိပါတယ်။
ပန်းတိုင်ကျနော်တို့ icts အဲဒီအစားငှက်ပျောသီးကိုအခွံရည်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဒီနေရာကိုယနေ့မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမှိုက်အဖြစ်စွန့်ပစ်, ငှက်ပျော peels စားသုံးဆီဖြစ်ကြပြီးတကယ်တော့ဆက်ပြောသည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၏တစ်ဖွဲ့လုံးဌန်ပေးပါ။ အံ့သြ? ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, လူတွေအစာခြေ, နိမ့်လက်စထရောနှင့်ဘုံအသားအရေပြဿနာတွေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ Improve မှငှက်ပျော peels ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်သည်သင်၏နှစ်ဦးစလုံးငှက်ပျောခွံကိုစားခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ရန် Topic ကလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးတဦးတည်းအလားအလာအကောင်အထည်ဖော်မှုမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။
အရာတစ်ခုမှာသေချာဘို့ဖြစ်၏ - သင်ပြီးနောက်-သူတို့ကလုပ်ပေးနိုင်သလားလူအပေါင်းတို့သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောအရာတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသင်အမှိုက်အတွက်အဖိုးတန်စာတမ်းထုပ်နဲ့ပေါက်ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးကျေးဇူး #5 ရိုးရိုးသားသားသင်၏အသက်တာအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုငျပါသညျ!
အရင်းအမြစ် http: //hhdresearch.org/never-throw-away-a-banana-peel/ utm_source = & utm_medium = le10sport taboola & utm_campaign = 314_hhd_bananapeel_world & utm_content = 170161892
သင့်ရဲ့ consomations များ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေး application တစ်ခု: Open ကိုစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်ရပ်မှန်များ